Gini bu ECN | Mụọ uru nke ezigbo ECN Forex Broker
Kedu ihe bụ ECN
Kedu ihe bụ ECN Forex Trading?
ECN, nke na-anọchi anya Netiwọki Nkwuputa, n'ezie bu uzo nke odinihu maka ndi ahia ahia mba ofesi. ECN nwere ike ịkọwa nke ọma dị ka àkwà mmiri na-ejikọ ndị na-esonye na obere ahịa na ndị na-enye ya mmiri site na Brolọ ọrụ ECE Broker.
ECN bụ nnukwu mmiri n’etiti ndị sonyere n’ahịa ntakịrị na ndị na-enye ha mmiri. A makwaara dị ka usoro azụmaahịa ọzọ (ATS), ECN bụ nnata na kọmputa na-eme ka ahịa ego na ebuka na-abụghị gbanwere mgbanwe ọdịnala.
Ọ dị mkpa ịmara na ejiri aka mee azụmahịa niile tupu ndị 1970, yana mmachi ahịa e-ere na 80s dị. N'oge ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ azụmaahịa eletriki niile ka emere site na sistemụ nkwukọrịta dị elu nke Reuters, nke akpọrọ Reuters Dealing.
Ulo ahia nke ugbua elekere izizi palitere na mbido 90s mgbe ha malitere imekorita ndi na-ere ahia na ndi na-ere ahia ka ha gh’ezie akara nke ego. Ọ bụ na Netwọọkụrịta Nkwukọrịta a adịbeghị mbụ; N’ezie ha adiwo site na mbubreyo 1960s ma ejighi ya maka ahia azumahia rue oge 90s.
Ihe mbu mbu - Mara onye ahia gi
A na-ekwu na ahịa Forex bụ otu n'ime ahịa ndị ama ama maka obere ndị ọchụnta ego. N'ebe a, a na-enweta uru site na ntakịrị ntakịrị mgbanwe ego na ụzọ abụọ. Ma n'adịghị ka azụmahịa nke mbak ma ọ bụ akụ, ndị mba ọzọ mgbanwe azụmahịa anaghị ewere ọnọdụ na-achịkwa mgbanwe.
Kama, ọ na - eme n'etiti ndị na - azụ ahịa na ndị na - ere ahịa si n'akụkụ dị iche iche nke ụwa, site na ahịa na - aga ahịa (OTC). Na, ekwesighi ikwu na ịkwesịrị iji onye na-ere ahịa iji nweta ahịa a.
N'ihi ọkwa nhọpụta ya, ịhọrọ onye na-ere ahịa ziri ezi nwere ike ịpụta ọdịiche dị n'etiti ihe ịga nke ọma na ọdịda na mbọ azụmahịa Forex gị. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa ahịa n'ahịa na-enye ngwaahịa na ọrụ ndị yiri ya, ị ga-enwerịrị ike ịchọpụta ụdị dillaị dị iche iche tupu ịmalite azụmaahịa Forex.
N’uche, enwere ụdị ahia ahia abuo na ahia ahia Forex: Ndi n’ezu ahia na ndi ECN. Dị ka aha ahụ na-egosi, ndị na-ere ahịa bụ ụdị ndị na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ ọnụ ma na-arịọ ọnụ ahịa site na iji usoro nke aka ha si otú a 'na-eme ahịa ahụ'. Egosiputa onu ego ha dobere n’elu nyiwe ha n’aka ndi nwere ike ichu ego ma obu mechie ahia ahia ha.
ECN -'dị '' Purest '' nke Forex Broker Out there
Dị ka na-emegide ndị na-ere Ahịa, na Netiwọki Nkwuputa (ECN) ndị na-ere ahịa anaghị enweta uru na ọdịiche gbasaa, mana kwụọ ụgwọ ọrụ maka ọkwá kama. N'ihi nke a, mmeri nke ndị ahịa ha bụ mmeri nke ha ma ọ bụ ihe ọzọ ha agaghị enwe ike inweta uru ọ bụla.
Ndị ahịa ECN bụ ndị ọkachamara banyere ego na-eji netwọ elektrọnikụ ọkaibe ha jikọọ ndị ahịa ha na ndị ọzọ sonyere n'ahịa. Ejikọtara ọnụ sitere na ndị otu dị iche iche, ndị na-ere ahịa ECN na-enwe ike inye ọnụahịa siri ike / jụọ mgbasa gbasaa.
E wezụga ijere nnukwu ụlọ ọrụ ego na ndị na-azụ ahịa ahịa ahịa, ndị na-ere ahịa ECN na-ejikwa ndị ahịa azụmaahịa n'otu n'otu. Ndị ECN na-enyere ndị ahịa ha aka ịzụ ahịa megide ibe ha site na iziga ihe ntinye na onyinye n'usoro sistemụ.
Otu n'ime ebe nkiri nke ECN bụ na ma ndị zụrụ ahịa ma ndị na-ere ahịa ahụ ka na-amaghị aha ya na akụkọ banyere igbu ọchụ. Trazụ ahịa na ECN dị ka mgbanwe ndụ na-enye ọnụ ahịa kachasị mma / ịrịọ ọnụego ọnụego ego niile.
Site na ECN, ndị na-azụ ahịa na-enweta ọnụahịa ka mma na ọnọdụ azụmaahịa dị ọnụ ala karịa Onye ahia ECN na-enwe ike ịhapụ ọnụ ahịa site n'aka ndị na-enye mmiri mmiri dị iche iche. Na mgbakwunye, mpaghara azụmaahịa nke onye na-ere ahịa ECN na-arụ ọrụ nke ọma ma doo anya, na-agbakwunye n'ihu na mkpesa nke e-ahia.
Uru ECN - Ihe mere ị ga - eji zụọ ahịa na ECN Broker
Iji ihe Onye ahia ECN nwere ọtụtụ uru; n'eziokwu, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-ere ahịa na-elegara ndị na-ere ahịa ECN anya, yana ebumnuche doro anya. Ndị na - azụ ahịa ECN na - enye ọtụtụ uru dị ukwuu, nke nwere ike inyere ha aka ịbanye n'ihu ndị isi ibe ha. Nke a bụ ụfọdụ uru dị mkpa nke iji onye na-ere ahịa ECN.
Nzuzo, nzuzo na nzuzo
Often na-abụkarị akwụkwọ mepere emepe mgbe ị na-azụ ahịa azụmaahịa Forex. Agbanyeghị, nzuzo na nzuzo na-eburu oke mkpa mgbe ịchọrọ ịda n'ụzọ nke onye na-ere ahịa ECN. Ihe nzuzo dị elu na nzuzo na-emetụta eziokwu ahụ bụ na onye na-ere ahịa ga-abụ naanị onye ọka oke na ahịa kama ịbụ onye na-ere ahịa.
A na-enye ndị ahịa ohere ịnweta ọnụ ahịa ahịa site na onye ọrụ ECN na akaụntụ raara onwe ha nye. Ebe ọ bụ na ọnụahịa ahụ dịgasị iche iche n'enye ọkọnọ, ọchịchọ, enweghi ike, yana gburugburu ahịa ndị ọzọ, site na onye na - ere ahịa ECN ziri ezi, mmadụ nwere ike zụọ ahịa na mgbasa ozi dị ala.
Egbu Azụmahịa Ngwa
Ihe a bu ihe ndi ahia ahia mba ozo na enweghi ike imebi ihe ha bu. Ndị ahịa ECN na-ekwe nkwa na arụmọrụ ahịa dị ire nke ọma na ọ bụla na-aga. Specificzọ a ọhụụ a si azụ ahịa adịghị mkpa ka onye ahịa ya na onye na-ere ahịa, kama ọ na-eji netwọkụ ya etinye iwu. Zọ a dị iche n'ezie na-eme ka onye ọ bụla nwee obi ụtọ maka ogbugbu azụmahịa a ka mma.
Accessnweta Ndị Ahịa na Liquidity
Ndị ọrụ ECN na-arụ ọrụ na ihe nlereanya nke na-enye ohere ọ bụla na ohere ọ bụla iji zụọ ahịa n'etiti ọdọ mmiri zuru ụwa ọnụ nke ụlọ ọrụ ego na-achịkwa, na-achịkwa, na ndị ruru eru. Na mgbakwunye, n'ihi otu esi ebufe ozi, njikọ pụtara ọzọ abamuru ọzọ nke onye na-ere ahịa ECN. Enyere ndị ọrụ ECN niile ohere ịnweta otu data ahịa na azụmaahịa ahụ; nihi ya, o doro anya na uzo ihe ahia si di otutu ndi n’enye ihe gha aturu agha.
Otu uru bara uru nke onye ahia ahia ECN yana akaụntụ ahia Forex ejikọtara bu. Nyere ọdịdị nke azụmaahịa Forex, izu ike adịghị mkpa, ọ dịghịkwa eme n'etiti ahịa. I rite uru na onye na-ere ahịa ECN, inwere ike zụọ ahia n'oge ihe omume na ozi, ma enwere ike ime ka ọrụ na-aga. Nke a na-emekwa ka ohere maka onye ọchụnta ego ọ bụla ka ha rite uru na ọnụ ahịa ahịa ọnụahịa Forex.
Kedu ihe FXCC-ECN bara uru?
Ọrụ ahịa ECN bụ aha amaghị, nke a na-enye ndị ahịa aka iji ọnụahịa na-anọpụ iche, na-achọpụta na ezigbo ọnọdụ ahịa na-egosipụta n'oge niile. Enweghi mmegide megide nduzi nke onye nlere dabere na ma: uzo ahia ahia, uzo, ma obu ugbua ahia.
Mgbasa ahia ngwa ngwa
Ndị ahịa FXCC-ECN nwere ike ịzụ ahịa n'egbughị oge, na-eji ndụ, iyi egwu, ụgwọ kachasị mma n'ahịa, na nkwenye ozugbo. Ụdị FXCC-ECN na-egbochi nnyonye anya site n'aka ndị na-ere ahịa, ya mere, ihe niile FXCC trades bụ ndị ikpeazụ ma kwenye na ozugbo emere ha ma jupụta. Enweghị ebe okpokoro na-emechi, ọ dịghị mgbe ọ bụla ị gụgharịrị.
Onye ahịa, ọnụọgụ ego
Ụdị FXCC ECN na-enye ndị ahịa ohere ịzụ ahịa na mmiri na-akwụ ụgwọ zuru ụwa ọnụ, ụlọ ọrụ ego na asọmpi na-asọmpi.
Azụmahịa azụmaahịa / ahịa ahịa
Site na iji FXCC's API, ndị ahịa nwere ike ịjikọta algorithms ha, ndị ọkachamara ọkachamara, ụdị na usoro nchịkwa ihe ize ndụ na ndepụta data ahịa dị ndụ na ọnụahịa ntanye ọnụ. FXCC na-ebi ndụ, nke na-anọghị na ya, nke a na-akwụ ụgwọ na-agụnye ihe kacha asọmpi ma rịọ ego dị na oge ọ bụla a na-ere ahịa. N'ihi ya, usoro ahịa ahụ na-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi ma na-agbanwe agbanwe ma ọ bụrụ na azụmaahịa azụmaahịa azụ, ma ọ bụ maka ịzụ ahịa ndụ.
FXCC dị iche site n'aka onye na-ere ma ọ bụ onye na-ere ahịa dị ka FXCC anaghị achịkwa mbido / agbasa na-agbasa ma ya mere, anyị enweghị ike ịnye otu nnyemaahịa ma ọ bụ mgbasa ozi a na-agbasa n'oge niile. FXCC na-enye mgbanwe eziokwu na-agbasa.
Na ECN, ndị ahịa nwere ohere na-ere ahịa n'ahịa. Ọnụahịa ahịa na-agbanwe agbanwe na-egosipụta ntinye, ịchọrọ, volatility na ọnọdụ ahịa ndị ọzọ. Ụdị FXCC-ECN na-enyere ndị ahịa aka ịzụ ahịa na mgbasa / inye mgbasa, nke nwere ike ịdị ala karịa otu pip na ụfọdụ ndị isi na ụfọdụ ọnọdụ ahịa.